On août 13, 2018 49 464
Soratra sy sary: Rakotonirainy Andry
Tovolahikely vao 15 taona i Cyrus A. Zamanifatakana. Kilasy taona fahasivy izy, ka hiatrika ny fanadinana BEPC, amin’ny volana septambra ho avy izao.
Anisan’ny toetra mampiavaka azy, ny fahatsorana eo amin’ny fiainana. Be fitiavana izy sy antra olona, ary mivoy hatrany ny fihavanana malagasy. Tovolahy tsy be teny, saingy miasa mangina amin’izay zavatra hataony. Anisan’ireny ny fanaovany asa soa amin’ny ankizy mpiray tanana aminy. Tahaka ny hetsika manokana nataony teny Ivoanjo, Tsarahonena, kaominina Anosiala, io folakandro io. Nisy ny fanomezana fitaovana ho an’ny ankizy 16 mianadahy, izay hiatrika ny fanadinana CEPE rahampitso. Ity hetsika ity dia niarahany tamin’ny zandriny Rihanna I. Zamanifatakana, vao fito taona. « Trousse », penina, pensilihazo, fitsipika, gaoma, » rapporteur « , ary vola 1000 Ariary isan’ankizy no nozarain’izy mianadahy.
« Vola azonay avy amin’i reninay no hangonina ka misy ampahany hatokana hanampiana ny hafa, misy ny hoentina miala-sasatra, misy ny ampirimina, hiatrehana izay filana tampoka », hoy Cyrus, nanazava ny fomba ahafahany manatanteraka asa sosialy.
Marihina fa zaza nobeazina amin’ny fiainana kristianina izy mianadahy ka manome lanja ny fitiavana ny hafa. Anisan’ny mamolavola azy ireo rahateo ny fiainana maha- Antilin’i Madagasikara azy.
Tsy tia lainga, tsy mankasitraka ny fanosihosena ny zon’ny ankizy, ary zavatra tsy zakany eo amin’ny fiainana ny mahita zaza mijaly toy ny kamboty sy ny mpatory an-dalana.
Ankoatra izay, tia milalao basikety i Cyrus saingy ny fialam-boly mahafinaritra azy dia ny mandeha an-tongotra miaraka amin’ny anabaviny sy ny reniny, izay mitaiza irery azy mianadahy.
Toy ny zatovo rehetra, ny Pizza no sakafo tiany, indrindra rehefa atao misimisy fromazy. Sarotiny amin’ny fahasalama izy ka mifady ny zava-pisotro simika sy misy entona » gaz » araka izay azo atao. Mankafy sakafo malagasy koa anefa, ny trondro endasina sy ron’akoho gasy no ankafizin’ny tovolahy.
Ny ho tonga manamboninahitra ambony miaramila na ho mpanamory fiaramanidina no asa tiany hatao rehefa lehibe. Dieny izao, efa manomana izany izy. Ny reniny rahateo izay mamela azy malalaka hisafidy sy mba hahay handray an-tanana tsikelikely ny ho aviny.
FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA: HANDRASANA NY FILOHA RAJAONARIMAMPIANINA HERY SY RAVALOMANANA MARC